Landa i-Free Ringtones for Android™ apk yakamuva yakamuva App yi-BestRingtonesApps yamadivayisi we-android
Ikhasi Lasekhaya izinhlelo zokusebenza Umculo NomsindoFree Ringtones for Android™
Ukuncenceka kwamahhala namaphephadonga kuhlelo lokusebenza lweringithoni lokuthenjelwa kunazo zonke ngo-2019
I-Ringtones yamahhala ye-Android ™ ikusiza ukuba wenze kalula ifoni yakho nge ukuncenceza komculo omusha kanye namaphephadonga we-HD. Abantu abangaphezu kwezigidi ezingu-30 bathembele kuma ukuncenceza amahle kakhulu, imisindo namaphephadonga ku-Free Ringtones for Android ™. Thola ukuthi kungani. Landa ukuncenceza kwakho kwamahhala womculo namaphephadonga bese usetha iringithoni entsha manje.
🎵 <u> AMAMAKHONI AMAHHALA AMAHHALA EMPHINI YAKHO 🎵
Ukuzenzela ifoni yakho akukaze kube lula. Landa ama-Ringtones wamahhala we-Android ™, khetha iringithoni engcono kakhulu yeringithoni yakho yefoni bese ukhetha amanye amakhomithoni epholile njengamakholi wakho wokuxhumana. Uma usuhamba ngalezi ukuncenceza zamahhala namaphephadonga, uzothola lokho, phakathi kwezinhlobonhlobo zezintandokazi zamahhala ezingu-500 + namaphephadonga angu-750+, lokhu kutholakala ukuncenceza kanye nezinhlelo zokusebenza zamaphephadonga kuzoba nokuthile okunambithekayo. Ungabeka lezi ukuncenceza eziphezulu njengomsindo wakho wokungenayo, iringithoni ye-SMS, noma umsindo we-alamu - ngamaRingtones wamahhala wezinketho ze-Android ™ app ongaphaya komkhawulo! Khumbula ukwenza ngokwezifiso iphepha lodonga lakho lefoni njalo - isigaba sangemuva sangasese samahhala sinikeza izizinda zefoni zokuthanda nokuthanda izinto ezihlukahlukene.
<u> AMAMAKHONO AMAHHALA EMIKHATHI YEZIKHUNGO ZEZE ANDROID ™:
🎵 Setha njengeringithoni ye-Android ™ / ithoni yokuxhumana yomsindo / umsindo we-alamu / umsindo we-SMS
🎵 Setha isikhathi sokudlala umsindo
🎵 Setha inkinobho yewijethi yemisindo oyintandokazi esikrinini sakho sasekhaya
Izigaba: Okudume kakhulu, Imvelo, Umculo we-Classical, Ukuvuna, Ibhizinisi, Umculo we-elekthronikhi, iDwala, i-Hip Hop, uKhisimusi, I-Funny, Izaziso, ama-alamu
🎵 ENTSHA: Setha njengephephadonga - sebenzisa i-wallpapers engcono kakhulu ye-Android kumlando wakho wefoni
Izinhlelo zokusebenza ze-ringtone ezintsha zivela nsuku zonke, kepha ama-Ringtones wamahhala we-Android ™ yilokhu okukhethwa ngabantu isikhathi eside. Sengeza ukuncenceza okusha kanye nezigaba ezintsha zeringithoni kumahhala wamahhala we-Android ™ ngaso sonke isikhathi, sivuselela uhlelo lokusebenza lethu lweringithoni yamahhala ngokusho kombiko wakho nezidingo zakho, yingakho ama-Ringtones wamahhala we-Android ™ uhlelo lokusebenza lweringithoni yabantu. Faka manje futhi ujabulele!
<u> I-INGALI INFO:
Ama-movie, ukuncenceza nokulanda umculo okusetshenzisiwe kuma-Ringtones wamahhala we-Android ™ uhlelo lokusebenza ngaphansi kwelayisensi yesizinda somphakathi kanye / noma ilayisense ye-Creative Commons, okudalwe ngaphakathi kohlelo lokusebenza. App design kanye ikhodi © Best Ringtones Apps - 2019.
Sicela ubike izimbungulu ku-jancicdjordje84@gmail.com
I-Android inguphawu lokuthengisa lwe-Google Inc. I-Ringtones yamahhala ye-Android ™ uhlelo lokusebenza ayixhunyiwe noma nganoma iyiphi indlela ehlobene ne-Google Inc.</u></u></u>